Maamul Goboleedka Cusub ee Hirshabeel oo Doortay Madaxweyne iyo Ku-xigeenkiisa – WARSOOR
Jowhar – (warsoor) – Waxaa magaaladda Jowhar ka dhacay doorashadii madaxweynenimadda ee maamulka cusub ee Hirshabeel. Doorashaddan waxaa madaxweyne loogu doortay Cali Cabdilaahi Cosoble, waxaana madaxweyne ku-xigeen loo doortay Cali Cabdilaahi Xuseen (Cali Guudlaawe).
Doorashaddan ayey u codeeyeen baarlamaanka dhawaan ay soo magacaabay duubabka dhqanka ee gobolkada Hiiraan iyo Shabeeladda Dhexe. Tiradda doorashadan u codeeyey madaxweynaha maamulkan cusub ayaa dhamayd 98 xildhibaan.
Gudoomiyaha Baarlamaanka maamulka cusub ee Hirshabeele Sheekh Cusmaan Barre ayaa ku dhawaaqay natiijaddii codaynta xildhibaanadda ee madaxweynaha, waxaanu sheegay in 61 cod uu helay Cali Cabdilaahi Cosoble halka uu helay ninkii jagadaasi kula tartamaayey 36 cod oo ahaan Maxamed Cabdi Waare, waxaan xumaaday hal cod. Sidaasi waxaa madaxweyne loogu doortay maamulka Hirshabeel Cali Cabdilaahi Cosoble.
Baarlamaanka Hirshabeel ayaa isla markiiba bilaabay inay isna cod u qaadaan jagadda madaxweyne ku-xigeenka ee maamul goboleedka Hirshabeel waxaan ku guulaystay madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeel Cali Cabdilaahi Xuseen (Cali Guudlaawe).
Doorashadan maamulkan cusub ee loo doortay maamul goboleedka Hirshabeel ayaa wali waxaa jira beelood ka horjeeda qabsoomidda doorashaddan kuwaasi oo ku sugan magaaladda Baladweyne.